အက်ပလ် မှ ထုတ်ဝေဖြန့် ချိမည့် i Phone4White ၊ i Pad2ကို နိုင်ငံတကာ သို့ စဖြန့်| Freedom News Group
အက်ပလ် မှ ထုတ်ဝေဖြန့် ချိမည့် i Phone4White ၊ i Pad2ကို နိုင်ငံတကာ သို့ စဖြန့် 
by FNG on April 27, 2011	Apple ကုမ္ပဏီ မှ ယနေ့ ထုတ်ဝေဖြန့် ချိသည့် i Phone4သည် အိုင်ဖုန်း ၏ စတ္ထမြောက် မျိုးဆက် ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် နှင့် ဥရောပ နိုင် ငံ အချို့ ရှိ 4G Network အတွက် ရည်ရွယ် ထား ပြီး High Resolution ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများ မှာ အမှာ စာများ ပြင် သီးသန့် မှာ ယူမှု ရှစ် သောင်း ကျော် ကနဦး
ရရှိထားသည် ဟု ကာလီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်လောစ်ဇင်ဂျလိဇ် မြို့ မှ Apple အရောင်း ဆိုင်မှာ
မသီတာဦးက FNG သို့ ပြောသည်။ iPad2ဟု ခေါ်သည့် iPad ဒုတိယ မြောက် မျိုး ဆက်မှာ
အမေရိကန် နိုင်ငံ တွင် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ က စတင် ရောင်းချခဲ့ပြီး ၊ နိုင်ငံတကာ သို့ ယမန် နေ့ 
က စတင်ဖြန့် ချီခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
၁၆ ဂီဂါ ဘိုက် မှာ ၁၉၉ ဒေါ်လာ ဖြစ်ပြီး၊ ၃၃ ဂီဂါ ဘိုက် မှာ ၂၉၉ ဒေါ်လာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဈေးနှုန်းများ
မှာ AT&T နှင့် Verizon iPhone4 ထွက်ရှိလာမှု ကြောင့် iPhone33G ယခင် မော် ဒယ် မှာ
ရုတ်တရက် ဈေးထိုးကျသွားသည်။အက်ပဲလ် ကုမ္ပဏီသည် အိုင်ဖုန်း စတ္ထု ထ မြောက် မျိုး ဆက်
ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင် ထုတ်ဝေမည်ဟု ၂၀၀၉ ခုနှစ် ကတည်း က အသိပေး ခဲ့သည်။
iPhone အနက်ရောင် မှာ ဈေးကွက် တွင် စတင် ရောင်း ချနေပြီ ဖြစ်သည်။
အက်ပဲလ် ကုမ္ပဏီသည် သည် Mac ကွန်ပျုတာ၊ အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပက်၊ အိုင်ပေါ့ စသည် တို့ ကို
ထုတ်ဝေသည်။ ယခု ထုတ်ဝေသည့် အိုင်ဖုန်း သည်မျက် နှာပြင် ကို Retina Display စနစ်ဖြင့်
ပြသမည် ဖြစ်ပြီး ဗီဒီယို ချတ် နည်းစနည်းများ၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးတည်းဖြတ် မှု နှင့် အွန်လိုင်းတွင်
လွှင့်တင် ခြင်း နှင့် လူမှုကွန်ယက် အသုံး ပြုမှု များ ကို ပိုမို ကောင်းမွန် စွာ ထည့်သွင်း ဖြည့်စွက်
ထားသည်။ Iphone4မှာ ကနဦး မျိုး ဆက်များ ထက် ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။
ပထမ မျိုးဆက် အိုင်ဖုန်း အမျိုးအစား ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ တွင် ဖြန့် ချိခဲ့သည်။
iPhone4အနက်ရောင်
This changes everything. Again. Introducing iPhone4– the biggest thing to happen since iPhone. iPhone4offers FaceTime, HD video recording, Retina display, Multitasking and much more.
Please note:adata plan is required for the life of your iPhone service and cannot be removed in the future.
Email Mobile Email
Video & Web Web browser
Memory Internal memory storage
Wireless Technology GSM/GPRS
Warranty: New wireless devices carryaone-year warranty from date of purchase.
Refurbished devices carryaninety-day warranty from the date of purchase. To makeawarranty
claim after the first 30 days from purchase, call 1-800-801-1101.
Could the White iPhone4Be Coming on Wednesday? (blippitt.com)
“White iPhone4Coming To Best Buy Stores On April 27th!” and related posts (tnerd.com)
White iPhone4sold in Italy, Belgium ahead of schedule (geek.com)
VIVA’s Exclusive iPhone Deal with Apple (buzfairy.com)
Apple gets its white iPhone4ducks inarow ahead of launch (engadget.com)
Is this the 3.7-inch iPhone, or Photoshop? (zdnet.com)
Tags: Apple, Apple Lossless, FaceTime, Handhelds, IPhone, IPhone 4, Smartphones	From: နည်းပညာ သတင်း, လူငယ်ရေးရာ	← ကော်လိုရာဒို ယာဉ်မောင်း လိုင်စင် ပြဿနာ မြန်မာ နိုင်ငံ မှ ရွှေ့ ပြောင်းလာသူများ ကြား ဂယက်ရိုက်
ဂူဂဲလ် ဗီဒီယို နှင့် Friendster လူမှုကွန်ယက် မဖျက်သိမ်းခင် မိမိ တို့ ၏ အချက် အလက် များ ပြန် လည် ရယူထား ရန် နှိုးဆော် →
Is that update iph4? Still have antenna problem?
April 27, 2011	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,526,398 hits
Thailand will hold elections by February 2; Yingluck may not be her party's choice to run, government spokesman says. 21 hours ago